Hoteelka Ritz oo ay ku xirnayeen amiiro rer Sacuudi ah ayaa dib loo furay - BBC News Somali
Hoteelka Ritz oo ay ku xirnayeen amiiro rer Sacuudi ah ayaa dib loo furay
Hoteelka Amiirada ay ku xirnayeen
Hoteelka Ritz-Carlton ee magaalada Riyaad ee caasimadda waddanka Sacuudiga ayaa dib loogu furay martida saddex bilood kaddib markii uu noqday xabsi heer sare ah oo lagu hayo amiirrada iyo rag tujaar waaweyn ah. Waxay halkaas ku xirnaayeen intii laga baarayay hawl gal ballaaran oo wax lagaga qabanayo musuqmaasuqa dalkaas.
Hoteelka Riyaad ee Ritz-Carlton waa erayga ugu dambeeya ee taajirnimo lagu sheegi karo. Waa qasri ka samaysan dhagxaan qurux badan oo dhalaalaya, nalal waaweyn, beero, iyo qolal raaxa badan.
Dhowaanahan waxaa uu ahaa sidii xabsi aan aad loo jeclayn oo ay ku jireen boqollaal qoyska reer boqor ah iyo maalqabeenno waaweyn oo musuqmaasuq lagu tuhunsan yahay. kaddib waraysiyo lala yeelanayey muddo bilooyin ah mas'uuliyiyiintu waxay sheegeen inay dadkaas ka soo xareeyeen lacag ka badan hal bilyan oo dollar martidan gaarka ah ee ku jirtay Hoteelka Ritz.
Laakiin baaritaankii haatan waa uu dhammaaday. Hoteelkii dib ayaa loo furay . Marka aad nalalkiisa hoos joogtid waxay u ekaan doontaa in wax waliba caadi ku soo noqdeen sidii iyadoo aanay waxba dhicin oo kale.
Sacuudiga oo xiray Amiirro ku mudaharaaday qasriga madaxtooyada